Better Skin နဲ့မှ လန်းဆန်းမှုအစစ်အမှန်ကို ခံစားနိုင်မှာပါ ? စိတ်ပင်ပမ်း လူပင်ပမ်းနဲ့ ထိုင်းထိုင်းမှိုင်းမှိုင်းဖြစ်နေရင် Better Skin Coffee Soap Scrub နဲ့ ရေချိုးလိုက်နော် ? Better Skin မှာ သဘာဝစစ်စစ် ကော်ဖီ၊ မန်ကျည်း၊ နနွင်း ပါဝင်တာကြောင့် သွေးလည်ပတ်မှုအား ကောင်းစေပြီး ကော်ဖီအနံ့လေးက လူကို လန်းဆန်းကာ စိတ်ကိုလဲ ကြည်လင်စေပါတယ်။ ? Bubble Net လေးလဲ တစ်ခါတည်းပါလို့ ပိုအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့ ? Better Skin Coffee Soap Scrub (120 g) တစ်တုံး ၄,၅၀၀ ကျပ်
Better Skin Soap ရဲ့ Target Trip က ဒီ August နောက်ဆုံးဖြစ်လို့ Target လေးပြည့်အောင် ကြိုးစားကြမယ်နော် ✈️ 2020 June လ မှ August လအတွင်း Better Skin Soap အတုံး 5000 ရောင်းချသူတိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ပတ္တရားကမ်းခြေ ခရီးစဉ် သွားရောက်ခွင့်လက်မှတ် တစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေကုန် ညောင်းညာထိုင်းမှိုင်းနေသမျှ Better Skin Soap နဲ့ ရေချိုးလိုက်မှ စိတ်ထဲပေါ့ပါးကြည်လင်သွားတော့တယ်. Better Skin Soap 120g တစ်တုံး ၄၅၀၀ ကျပ်.
ရာသီဥတု ထိုင်းမှိုင်းနေလို့ နေရထိုင်ရတာ ခေါင်းမကြည်ဘူးလား. Better Skin BS Soap လေးနဲ့ ရေချိုးကြည့်လိုက်ပါ. ကိုယ်အတွင်းမှ အပူကင်းစင်ပြီး အဆိပ်အတောက်ကင်းစင်ကာ လန်းဆန်းလာစေပါတယ်. မယုံဘူးလား အခုပဲ စမ်းသုံးကြည့်လိုက်နော်... Better Skin BS Soap 120g တစ်တုံး ၄၅၀၀ ကျပ်.
ကော်ဖီပူပူလေးတစ်ခွက် ‌သောက်လိုက်ခြင်းက သင့် စိတ်တွေကို ကြည်လင်လန်းဆန်းလာ‌စေသလိုပဲ BS Coffee Soap ‌လေးနဲ့ ‌ရေချိုးလိုက်ခြင်းက သင့်အသားအရေကို ကြည်လင် လန်းဆန်းအင်အားပြည့်၀လာ‌စေပါတယ်. Better Skin > Better Health > Better Life Better Skin Coffee Scrub Soap 120g တစ်တုံး ၄၅၀၀ ကျပ်. Focus Beauty Agent များထံ မှာယူနိုင်ပါပြီ.